Waxaa lagu wadaa in uu maanta furmo Shirka Madasha Wadatashiga Doorashooyinka Qaran – STAR FM SOMALIA
Saacadaha soo socda ee maanta ayaa lagu wadaa in Magaalada Muqdisho uu ka furmo shirka Madasha Wadatashiga Doorashooyinka Qaran ee Somaliya, waxaana shirkaan ka qaybgalaya Madaxda Dowladda Federalka Somaliya, Madaxda Maamul Goboledyada dalka , masuuliyiin Beesha caalamka ka socota iyo xubno ka socda Bulshada rayidka.
Shirkaan oo socon doona muddo labo cisho ah ayaa waxaa lagu gorfeyn doonaa, nooca ay noqon doonto doorashada la filaayo in dalka Somaliya, ay ka dhacdo maadaama Dowladda Somaliya ay horay u sheegtay in dalka aysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod.
Wasiirka Warfaafinta Somaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, ayaa u sheegay Warbaahinta shirkaan inay isugu imaanayaan Hogaamiyeyaasha Maamul Goboledyada dalka, Madaxda Qaranka, Qaybaha Bulshada iyo xubno Beesha caalamka ka socda oo goobjoog noqon doona.
Waxaa la isku dhaafsan doona aragtiyada ku aadan doorashada la filaayo inay dalka ka dhacdo oo si guud oo Qaran looga tashan doono, kadibna la isla meel dhigi doono nooca doorasho ee dalka ka dhaceysa.
Shalay waxaa Magaalada Muqdisho soo gaaray Madaxweynayaasha Maamulada Puntland, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, kuwaasi oo u yimid ka qaybgalka shirkaan maanta furmaya.
Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho, ayaa la filayaa sida qorshaha uu yahay in uu shirkaan ka furmo, waxaana si weyn loo adkeeyay ammaanka Caasimada Muqdisho oo durba saaka aroortii ayaa la xiray wadooyinka Magaalada Muqdisho.
Ciidamada Booliska ayaa lagu daadiyay wadooyinka caasimada, gaar ahaan kuwa ku dhaw Madaxtooyada, waxaana ay xanibeen ciidamada isu socodka gaadiidka gaarka loo leeyahay, halka kuwa Dowladda ay wadada mari karaan.